Galmudug oo eedeysey Villa Somaliya si adagna u difaacdey go’aankii ahaa in aan Dowaldda Qatar lala safan- WARSAXAAFADEED • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Galmudug / Galmudug oo eedeysey Villa Somaliya si adagna u difaacdey go’aankii ahaa in aan Dowaldda Qatar lala safan- WARSAXAAFADEED
Galmudug oo eedeysey Villa Somaliya si adagna u difaacdey go’aankii ahaa in aan Dowaldda Qatar lala safan- WARSAXAAFADEED
September 21, 2017 - By: HORSEED STAFF
Maamulka Galmudug ayaa soo saarey war-saxaafadeed ku qoran farta Ingriiska maalintii shalay kaas oo ay ku taageerayaan Xulafada Sucuudiga ee ka dhanka ah dalka Qatar waxana ay Dowladda federaalka ugu baaqdey in ay ku metesho rabitaanka maamulada dalka ka jira oo ay ka noqoto dhex-dhexaadnimada loo fasirety in ay la safatey Qatar. Maamulka Galmudug oo aan ahayn mid ay u dhismeen hay’adihiisi dowladnimo ayaa Madaxweyne ku xigeenkii maamulkaas Carabey soo saarey qoraal uu uga soo horjeedo kan ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Galmudug Xaaf. Xukuumadda Federaalka ayaa maanta soo saartey war saxaafadeed ay ku adkeysanayso go’aankii ay ka qaadatey Xasaradda dalalka Khaliijka ee bilaamatey horraantii bishii Juun, waxaana ay sheegtey in maamulada dalka ka jira xiriir fiican ay la leeyihiin iyo iskaashi, laakiin looga danbeeyo arrimaha dibadda, inkasta oo Dastuurka qabyada ah qodobkiisa 53aad qabo in Dowladdu kala tashato arrimaha masiirka ah ee taabanaya danaha maamulada dalka ka jira.
Wasiirka Warfaafinta Galmudug ayaa gelinkii danbe ee Khamiista soo saarey war saxaafadeed aad u kulul oo ay ku adkeysanayaan dalabkoodi ahaa in Dowladdu ka noqoto go’aankeedi, sababaha dalka Qatar ay u tagaeereyso Dowladdu ayey sheegeen in ay tahay lacag ay ku taageertey Madaxweynaha xiligii doorashada, lacagtaas oo ay sheegeen qofka soo qaadey. Warka ayaa lagu sheegay si toos ah in dowladda dalka Qatar ay taageerto argagixisada oo ah waxa ay ku eedeeyeen xulafada Sucuudiga ee cunno qabateynta saarey Qatar.
Hoos ka akhri warka Galmudug oo saidiisi ah.
Iyada oo la qaddarinayo nuxurka iskaashi ee lagu shaqaynayo, xukuumadda Federaalku waa in ay Dawlad- goboleedyada kala tashataa wada-xaajoodyada la xiriira kaalmada dibedda, ganacsiga, cahdiyada ama arrimaha muhiimka ah ee la xiriira heshiisyada caalamiga ah.
Marka ay wada-xaajoodyadu si gaar ahaan u saamaynayaan danaha khuseeya Dawlad- goboleedyada, xukuumadda Federaalku ergada wada-xaajoodka geleysa waxaa kaabaya wakiillo ka socda Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka.
Xukuumadda Federaalka marka ay ka hawlgelayso wada- xaajoodyada, waa in ay isu aragtaa xilgudashadeedana ka muuqtaa in ay tahay ilaaliyaha danaha Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka.
Wixii faah-faahin dheeraad ah kala xiriir: